Maraakiibta kaluumeysiga waxay qatar ku yihiin keydka kaluun ee dalkeena | Somalisan.com
Home Afsomali Maraakiibta kaluumeysiga waxay qatar ku yihiin keydka kaluun ee dalkeena
Maraakiibta kaluumeysiga waxay qatar ku yihiin keydka kaluun ee dalkeena
Soomaliya waxay leedahay xeebaha ugu dheer ee xeebaha Afrika iyo mid ka mid ah dhulalka ugu qanisan ee kalluumeysiga adduunka. Biyaha Soomaaliya ayaa xakamaynayay ilaa iyo markii ay dhacdey dawladdii dhexe ee 1991-kii. Markab kalluumeysi oo shisheeye oo waawayn ah ayaa fursad u helay inuu bilaabo boobka iyo boobka ilaha badda. Sida laga soo xigtay warbixinnada, kalluumeysiga sharci-darrada ah ee Soomaaliya wuxuu u dhexeeyaa US $ 140-400 milyan sannadkii oo ka soo gala dakhliga lumay. Nasiib darro, qaar ka mid ah shirkadaha kalluumeysatada ee ugu awoodda badan ayaa ka xaday qaar ka mid ah dadka ugu saboolsan dunida.
Dhawaan, xukuumadda Soomaaliya ayaa 31 shuruuc oo kalluumeysi ah u siisay Shirkadda Kalluumeysiga ee Shiinaha ee Shiinaha. Heshiiska kalluumeysatada ee hal sano ah oo qiimihiisu yahay US $ 1m oo keliya ayaa loo qoondeeyey si qarsoodi ah oo aan loo dhigin dadweynaha. Dhawaan dhowaan, waxa uu u hoggaansamay in aysan jirin indha-indheeyaayaal Soomaali ah oo ka tirsan guddiga taas oo si cad u jahawareeraysa Sharciga Kalluumeysiga Soomaalida. Inkasta oo heshiisku aanu u qalmin, ma naqaanno quotas kalluumeysiga ama wadarta guud ee la oggol yahay ee markab kasta. Sidoo kale ma garanayno nooca kalluumeysiga ay isticmaali doonaan illaa iyo inta aysan jirin goob-joogayaal Soomaali ah oo ka socda guddiga si loo kormeero hawlaha kalluumeysiga.
Wasaaradda FMR waxay kormeeri doontaa 31-ka maraakiibta shatiga leh iyada oo loo marayo Nidaamka Kormeerka Gawaarida (ma hubo in VMS shaqeyneyso). Waxay marnaba ka jawaabin su’aalahayga arrintan. Ka hor 10 cisho kahor, waxaan ku soo qoray dhawr emaar oo ku saabsan dhammaan dadka ay khusayso oo ay ku jiraan Guddiga Badweynta Hindiya ee Tuunaniga ah oo weydiisanaya ku-meel-gaadhka xayiraadda ee sharci-darrada ah ee badda haddii aaney joogin goob-joogayaal IOTC ah. Waxaan sidoo kale la xiriiray Hay’adda Seychelles ee Kalluumeysiga si ay u weydiiso haddii Seychelles ay kormeereyso maraakiibta shatiga leh ee haysta bini’aadanka sida ay soo jeedisay warbixinta Baanka Adduunka ee 2016-ka. Illaa iyo hadda, weli wali kama helin wax jawaab ah.
Shirkadaha kalluumeysiga ee Shiinaha ayaa si wanaagsan u yaqaan inay ku xad gudbaan xeerarka kalluumeysiga, hababka kalluumeysiga burburay, iyo in badan oo ka mid ah dalalka Asia iyo Afrika, waxay ku hanjabeen dhaqaalahooda waxayna burburiyeen kalluumeysiga yaryar (cilmi baarista Google!). Dalka Soomaaliya, maraakiibta Shiinaha waxay u isticmaaleen inay si sharci daro ah ku kalluumaystaan ​​illaa iyo intii aan awoodno in aan aqoonsanno 7 ka mid ah maraakiibta shatiga leh ee horeyba loogu haystay kalluumeysiga sharci-darrada ah ee biyaha Soomaaliya sannadka 2015. Hadda maraakiibta hawlgalku waxay khatar toos ah ugu noqonayaan kaydka kalluunka, hab-nololeedyada iyo nabadgelyada cuntada ee dadka Soomaaliyeed .
Previous articleVIDEO safirada loo magacaabay Somaliland waa Kuwee iyo Khilaafka Xisbiyada
Next articleISBEDLEDA SIYAAASADA CAALAMKA ISXULAFAYSIGA CUSUB MAXAAD KALA SOCOTAAA?
Taliska Ciidanka Bolice ka oo Afhayeenkii la sugu waayey sheegayna in la qabtay lacago...
Warmurtiyeed ku saabsan qoondada beelaha lahayb sooco ee Baarlamaanka iyo Golayaasha Deegaanka
Somalisan News - November 13, 2018
Somalisan News - December 3, 2018